5 Dị iche iche Ball Valve Akara Mkpa Design-Nka na ụzụ Isiokwu-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve bụ akara anyị)
5 iche iche valvụ valvụ Akara Design
Oge: 2020-09-30 Hits: 53
Na ụlọ ọrụ valve, ihe kachasị mkpa maka valvụ bọọlụ iji mechie nrụgide n'ime usoro nchịkwa mmiri bụ oche valvụ ma ọ bụ ihu akara valvụ ahụ. Bọọlụ ahụ ga-ejikọ oche oche bọọlụ iji mechie nrụgide ahụ. Na usoro nchịkwa dị iche iche, ọ ga-enwe usoro dị iche iche, yabụ onye injinia imewe valvụ kwesịrị imeghari oche valvụ dị iche iche ma ọ bụ ihe nkedo dị iche iche bọọlụ dị iche iche iji mechie nrụgide ahụ site na iji ihe injinia dị iche iche. Isiokwu a ga-egosi 5 dị iche iche bọl valvụ oche imewe.
Kinddị oche bọọlụ bọọlụ nke mbụ bụ otu ụdị oche oche oche bọọlụ dị nro. Abụkarị agba nke oche a na-acha ọcha na na ọtụtụ-eji adụ oche bọl valvụ ụlọ ọrụ. Oche ọcha a sitere na PTFE. Enwere uru nke oche a site na injinịa Teflon na mgbe anyị ga-agbakọta ụdị oche valvụ a na bọọlụ n'ime eriri ahụ. Mgbe anyị ga-etinye bọlbụ na mpịakọta ụdị valvụ ahụ, ụdị nkwado a na-adị mfe ịmechi nrụgide n'ime usoro nchịkwa usoro. Agbanyeghị ọghọm a bụ n'ihi na oche valvụ abụghị ọla ma dị nro ma ọ bụrụ na mmiri adịghị ọcha ma nwee ntakịrị ntakịrị n'ime, mkpụrụ ahụ nwere ike imebi oche oche bọọlụ ma mee ka valvụ ahụ daa ka onye injinia na-achọ ụdị ihe ọzọ nke siri ike karịa ụdị ihe oche oche a dị nro yana kwa ihe ahụ bụ ihe na-agbanwe.
Ya mere, olee ụdị ihe onwunwe nke ihe onwunwe ahụ? Na ụlọ ọrụ valvụ bọl, ndị injinia na-emepụta agba ọzọ. Seatdị oche agba a dị iche iche na-abịa site na Rein-force PTFE ihe. Nzube nke ịzụlite ndị a acha oche ihe onwunwe bụ na anyị kwesịrị melite PTFE ngwa okpomọkụ nke elu. Ya mere, ndị injinia na-agwakọta ụdị ihe ndị ọzọ na PTFE iji mepụta ụdị ihe ọhụrụ.
The mbụ mma PTFE bụ na carbon mbuaha PTFE Iji mee otu ụdị nke oche a. Agba ya bụ oji.
Ọzọ bụ PTFE mix na igwe anaghị agba nchara. Nke a na ụdị ihe onwunwe oche nwere uru abụọ tụnyere ọcha PTFE oche. Otu bụ na ọ nwere ike ịrụ ọrụ na oke okpomọkụ site na sistemụ njikwa karịa ka ọ dị na mbụ. Nke ọzọ bụ na ekweghị ekwe nke anụ arụ dị mma karịa ka ọ dị na mbụ. Ihu ọma ihe a siri ike karịa PTFE dị ọcha. Ya mere, urughuru n'ime usoro mgbasa ozi anaghị adị mfe imebi oche valvụ bọọlụ jiri ya tụnyere PTFE. Ya mere, ụdị ihe abụọ a bụ ụdị oche valvụ ọzọ na ụlọ ọrụ valvụ dị nro.
Soft oche bọl valvụ bụ otu ụdị valvụ nke bụ nnọọ mfe na-efu leakage ọrụ n'ihi na valvụ oche bụ otu ụdị nke na-agbanwe ihe ma ụdị a nke imewe nwere otu mwepu nke bụ ma ọ bụrụ na ọkụ ahụ mere, ọkụ nwere ike kpamkpam ibibi valvụ oche. Yabụ ọ bụrụ na otu nrụpụta bụ usoro njikwa na-agba ọsọ ma ọ bụ jiri valvụ oche oche dị nro, ọ bụrụ na ọkụ ahụ emee, ndị niile na-asọpụta ga-enwete yabụ a ga-enwe nnukwu ihe egwu ka injinia chọrọ imepụta otu ụdị oche valvụ nke dị nro mana ọ nwere ike guzogide ihe ize ndụ nke ọkụ na nke a na-akpọ ọkụ nchekwa nchekwa dịka API 607.
N'ime ụlọ ọrụ bọọlụ bọọlụ dị nro, ụdị ụdị ihe ị ga - eji mee oche valvụ bọọlụ ma ọ bụrụ na ọkụ ahụ emee, ogo dị elu ga - ebibi oche valvụ bọọlụ ahụ, valvụ ahụ ga - ehi ehi nke ga - abụ ọnọdụ dị oke egwu ya mere na oche oche bọọlụ valve dị nro, nchekwa nchekwa ọkụ dị ezigbo mkpa. Ebe izizi nke ejiri bọọlụ kwado iji mechie nrụgide ahụ. Mgbe ọkụ mere ka ọkụ dị elu bibie oche mbụ n'ihi na usoro nchịkwa na-asọpụta na-enwe nrụgide n'ime, nrụgide ahụ ga-eme ka bọl ahụ gbadaa na ala. Ya mere, injinia ihe eji emepụta valvụ emebere akara nke abụọ. Ọ bụ n'ezie oche nke abụọ a bụ otu akụkụ nke ahụ valvụ ahụ. Ọ bụ ngwongwo ọla ka ọ ghara ikpochapu ya na oke okpomọkụ. Nakwa oche nke abụọ, akara akara ahụ dị oke oke ya mere na ọ dị mfe ịkwado bọọlụ iji mechie nrụgide ahụ n'ime usoro njikwa usoro. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a, mgbe nrụgide na-agbanye bọọlụ iji kwado oche oche nke abụọ iji mechie nrụgide ahụ n'ime sistemụ mmiri ahụ, valvụ bọọlụ enweghị ike ịrụ ọrụ ọzọ mana opekata mpe usoro mgbasa ozi na-asọba n'ime usoro njikwa na-aga n'ihu ka ọ dị mma. Ya mere, ụdị ụdị a anyị kpọrọ ọkụ nchekwa ọkụ.
Next bọl valvụ oche imewe bụ metal ka metal oche. Mgbe anyị na-ekwu maka oche igwe na ụlọ ọrụ valvụ bọọlụ, n'ezie anyị nwere ụdị oche oche abụọ. Otu bụ oche igwe na ihe ntinye dị nro dị ka foto dị n'okpuru.
Typedị oche a bụ nke ihe igwe na-eme, ọwa ahụ na-aga ịkwanye oche iji metụ bọl ahụ ka ọ kaa nrụgide ahụ mana ọ bụ n'ezie oghere mkpuchi oche oche nke mpaghara ga-emetụ bọọlụ ahụ abụghị ígwè n'ihi na anyị ga-etinye adụ oche ihe onwunwe n'ime oche oche ígwè. Mpaghara ga-emetụ bọl ahụ ka ọ kaa akara nrụgide n'ime usoro njikwa usoro ahụ. Ogwe oche oche ahụ bụ naanị etiti nke na-echebe ezigbo oche valvụ ahụ iji metụ bọl ahụ ka ọ kaa nrụgide ahụ. Nke a na ụdị oche imewe ọrụ na nnukwu size bọl valvụ na nwere elu arụmọrụ na ngwa n'ihi na adụ oche ihe bụ mfe-emebi na nnukwu size. Ogwe igwe iji chebe ihe dị nro dị n'okpuru ebe a.
E nwere ezi ọla ọzọ enwere oche oche nke bọọlụ bọọlụ. Bọọlụ valvụ ahụ na-eme ọla kpamkpam ma oche oche ahụ ga-arụkọ ọrụ na bọọlụ ọla iji mechie nrụgide ahụ n'ime usoro njikwa usoro. Nke a na ụdị oche nke imewe bọl valvụ nwere ike na-arụ ọrụ na nnọọ elu okpomọkụ na nnọọ elu nsogbu gburugburu ma ụdị a nke imewe siri ike na-amị n'ihi na obi ụtọ na oche mkpa ka nnọọ ezi ezi machined na Mike. N'ihi na oche valvụ bụ nke igwe mebere ka bọọlụ ga-esi ike karịa oche ahụ. Ọ bụrụ na bọọlụ dị nro karịa oche oche bọọlụ, mgbe ahụ oche oche valvụ ga-akọ bọọlụ ma mee ka valvụ bọọlụ bọọlụ. Ihe ọ bụla oche oche bọọlụ ị ga-emebe, ihu akara ahụ nke sara mbara ga-esi ike karịa ihu mkpuchi ahụ dị warara. Ngwongwo oche oche oche a dị ntakịrị ntakịrị n'ihi na e mere ya akara abụọ maka oghere oche oche valvụ. Uzo a nke akara uzo abuo a nwere ike ime ka akuku valvụ a kwesiri ntukwasi obi. Iji mee ka bọl ahụ sie ike karịa oche valvụ. Ọtụtụ oge anyị ga-eji ọtụtụ ọgwụgwọ dị iche iche mee ka bọọlụ sie ike karịa oche valvụ.
Nke ikpeazụ bụ akara valvụ valvụ. Kinddị valvụ a dị iche iche nwere ụdị ọpụrụiche nke ọma. Na ụdị ụfọdụ nke pụrụ iche eruba akara usoro, eruba media dị nnọọ corrosive, anyị ọbụna ike iji metal aka eruba media, otú anyị ga-eji PFA ma ọ bụ PTFE ma ọ bụ ndị ọzọ ụdị ihe onwunwe kpamkpam ekpuchi bọl na-ekpuchikwa ihe niile Mpaghara a ga-emetụ usoro mgbasa ozi ahụ.
Nke mbụ: Ihe na-ese n'elu mmiri na Valve Ball Trunnion Mounted Ball Valve Pressure Test Usoro